शब्द-सिर्जना : माछा, जाँड र रुद्र खरेल - मातृका पोखरेल
२०४५ सालतिरको कुरा हो । भरखरै मात्र म तत्कालीन रत्नराज्य कलेजमा बि.ए. पढ्न भर्ना भएको थिएँ । पढाई भन्दा राजनीति नै बढी प्राथमिकतामा थियो । सायद, दुधकाण्डको आन्दोलन चलिरहेको बेला थियो । त्यसै विषयलाई लिएर म लगायत दुई तिन जना साथीहरु मिलेर ल क्याम्पसमा पोस्टर टाँस्नु थियो । हिउँदको समय जस्तो लाग्छ । भरर्खरै मात्र भुईमा विहानको उज्यालो खस्न लाग्दै थियो । हामी साथीहरु बाँडिएर पोष्टर टाँस्न हिड्यौ । म पोष्टर टाँस्दै ल क्याम्पसको चमेनागृह भित्र पसें । एउटा पोष्टर चमेनागृह भित्रै टाँस्न पनि । टेबुलमा बसेर दुई तीन जना मान्छेहरु चियाँ खाइरहनु भएको थियो । मैले टाँसेको पोष्टर हेर्न त्यही बसेर चिया खाने मध्ये एकजना उठेर आउनु भयो र पोष्टर हेर्नुभयो र फिसिक्क हाँस्नुभयो । ‘लु आउनुस् भाई चिया खाउँ ।” काठमाडौं भित्रिएपछि अपरिचित मान्छेले चिया खान बोलाएको यो पहिलो पटक थियो । एक कप चिया फोगटमा प्राप्त हुनु मेरा लागि ठुलै संयोग थियो त्यसबेला । चिया खाँदाखाँदै उहाँले फेरी सोध्नुभयो । “यहाँ यी बहिनीले मिठो सेल पकाउँछिन । ल भाई सेल पनि खानुहोस् ।” मेरो स्वीकृति लिन आवश्यक नठान्दै उहाँले सेलरोटी मगाई दिनुभयो ।
उहाँले मगाई दिएको चिया खाजा खाएँ र उहाँले मागे जसरी आफ्नो परिचय दिएँ ।
एउटा अचम्मको मान्छेसँग भेट भयो ल क्याम्पसको चमेनागृहबाट बाहिरिदै गर्दा अरु कोठाबाट पोष्टर टाँसेर, फर्किएमा सहयात्री साथीहरुलाई भनेको थिएँ मैले ।
'मलाई अगि चिया खाजा ख्वाउने मान्छे ऊ उहाँ नै हो ।' पोष्टरहरु टाँसिसकेर ल क्याम्पसको प्राङ्गणमा छलफल गर्दा गर्दै उहाँ बाहिर निस्केको बेला मैले साथीहरुलाई देखाउको थिएँ ।
'उहाँ त यो कलेजको प्राध्यापक रुद्र खरेल हो । उहाँ साहित्यकार पनि हो ।' कुनै एक जना साथीले उहाँको बारेमा भन्नुभयो ।
साहित्यकार रुद्र खरेलसँग मेरो पहिलो भेट यसरी भएको थियो । त्यसपछि उहाँको मृत्युपर्यन्त म उहाँसँग कुनै न कुनै हिसावले निकट रहन पुगें ।
हामी सिकारुहरुका लागि त्यसवेला साहित्य सन्ध्या एउटा महत्वपूर्ण मञ्च थियो । आफ्ना रचना सुनाउन कहिले साहित्य सन्ध्या आउला भनेर पर्खनुपर्ने अवस्था थियो । साहित्यकार रुद्र खरेलसँग साहित्य सन्ध्यामा निरन्तर भेट हुन थाल्यो । साथी राजेन्द्र अधिकारी र म साहित्य सन्ध्यामा निरन्तर जान्थ्यौं । त्यसबेला राजेन्द्र अधिकारी आर . वस्तिको नामबाट कविता लेख्नु हुन्थ्यो । हामी तत्कालिन ने.क.पा. चौथो महाधिवेशनको बिध्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु मा संगठिन थियौ । ०४५ साल तिरकै कुरा हो भरखरै मात्र हामी दुबैले तत्कालिन ने.क.पा. (चौ.म.) का नेता श्याम श्रेष्ठ मार्फत कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता पाएका थियौं । म अनेरास्ववियु काठमाण्डौ जिल्ला समितिको अध्यक्ष थिए । साहित्यिक सन्ध्याको कार्यक्रम सकेर बाहिर निस्कदा हाम्रो बीचमा एउटा सूचना आइपुग्यो । अर्को महिना देखि माओ विचार पक्षीय साहित्यकारहरुले महिनाको तस्रो शनिवार प्रतिभा प्रवाह नामको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । यो सूचना दिने मान्छे पनि रुद्र खरेल हुनुहुन्थ्यो । हामी समवयका साथीहरुले त्यसबेला बुझ्यौ कि विभिन्न कित्तामा छरिएको वामपन्थी आन्दोलनमा उहाँ हाम्रै कित्तामा हुनुहुँदो रहेछ ।
एकातिर उहाँसँग हाम्रो भेट हुने ठाँउ साहित्य सन्ध्या त हुँदै थियो भने अर्को पनि थपियो प्रतिभा प्रवाह । हामी सिकारु कविहरुका लागि अर्को खुसीको कुरो थियो प्रतिभा प्रवाहको सञ्चालन । रुद्र खरेल प्रतिभा प्रवाहमा कुनै न कुनै भूमिकामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई कविता सुनाउन उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो ।
०४८ साल देखि मैले रुद्र सरसँग वेदना साहित्यिक त्रैमासिकको सम्पादन मण्डलमा रहेर काम गर्ने अवसर पाँए । त्यो सम्पादन मण्डलमा निनु चापागाँई प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो भने सम्पादकहरुमा रुद्र खरेल, खगेन्द्र संग्रौला, हरिगोविन्द लुइटेल र म थियौं । जिम्मेवारी लिएको काम दत्तचित्तका साथ गर्ने उहाँको बानी थियो । वेदना पत्रिकालाई स्तरीय बनाृन उहाँको ठूलो भूमिका थियो । राजनैतिक पीडित वापत राजयले दिएको केही नगद रकमको ठूलो हिस्सा पनि उहाँले वेदना पत्रिकामा हालेर आफ्नो उदार हृदय देखाउनु भयो । त्यसबेला सम्म म उहाँको करिवकरिव परिवारको सदस्य जस्तै भइसकेको थिएँ । उहाँ त्यसबेला कमजोर आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको थियो । कोटेश्वरमा घर बनाउदै हुनुहुन्थ्यो तर आर्थिक समस्याले उहाँ ग्रान्त हुनु हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा पनि वेदना लाई सहयोग गर्नु सामान्य घटना छँदै थिएन । वेदना लाई आर्थिक देखि स्तरीय रचना खोज्ने सम्मको काममा उहाँको अग्रणी भूमिका थियो । उहाँसंगको निकट सङ्गतले पत्रिकालाई स्तरीय बनाउने र अन्य सम्पादन कला मनग्य सिक्न पाएको मैले बारम्बार महशुस गरेको छु । जिम्मा लिएको काममा उहाँ प्रतिवद्ध भएर लाग्नुहुन्थ्यो । वेदना पत्रिकाको प्रसङ्गमा उहाँसँग मेरो एउटा रोचक घटना छ । हामीले २०५२ सालतिर वेदनामा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको एउटा विज्ञापन छाप्यौं । चिनी कारखानाले रक्सी उत्पादन गर्छ र भुक्तानी बापत हामीलाई रक्सी नै दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन । पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि हामी बिल लिएर कारखानाको कार्यालय पुग्यौं । वीरगञ्ज चिनी कारखानाको अध्यक्षमा त्यसबेला बलराम बाँसकोटा हुनुहुन्थ्यो । बलरामजीको सदासयताकै कारण हामीले त्यो विज्ञापन छापेका थियौं । विज्ञापन वापत हामीलाई पाँचसय रुपैया बराबरको तीन चार बोतल रक्सी दिइयो । रुद्र सर र म जिल्लाराम पèयौं । रक्सी बाकेर हिड्न शिवाय हामीसँग अर्को विकल्प पनि थिएन ।
'कुनै पसलमा गएर यो रक्सी बेचौं भाई '! रुद्र सरले उपाय सुझाउनु भयो ।
त्यतिबेला वीरगञ्ज चिनी कारखानाको काठमाण्डौ कार्यालय बालुवाटारमा थियो । हामी केही पसलमा रक्सी लिएर घुम्यौं । हामीलाई दिइएको मूल्यमा कसैले रक्सी लिन चाहेनन् । कति पसलले त हामीलाई शंकाका दृष्टिले हेरे ।
'माइतीघरमा मैले चिनेको एउटा भट्टी पसल छ । त्यही गएर दिउँ ।' केही पसल चहाँरे पछि उहाँले अर्को उपाय सुझाउनु भयो ।
हामी रक्सीका बोतल झुण्डयाउँदै माइतीघर आइपुग्यौं । भाषा सम्पादकको रुपमा रुद्र सर नेपाल बार एशोसियशनमा काम गर्दा एउटा चिया खाने पसलसँग राम्रो चिनजान भएको रहेछ । त्यो चियापसल विस्तारै भट्टी पसलमा रुपान्तरित भएछ । हामी त्यहाँ पुग्दा घाम डुब्न लागि सकेको थियो । पसलभित्र हामी के छिरेका मात्र थियौं तीन चार जना मानिसहरु हड्बढाउदै उठ्न खोजे । रुद्र सरको ध्यान त्यता पुगेकै थिएन । मेरो मात्र त्यो दृश्यतिर ध्यान थियो । रुद्र सरले ख्याल नगर्दानगर्दै उनीहरुले आ–आफ्नो टेबलको गिलास, वियर रक्सीमा बोतलहरु टेबुल मुन्तिर लुकाए । त्यसपछि मात्र उनीहरुले भरखर देखेझैं गर्दै रुद्र सरलाई अभिवादन गरे । ती सवै रुद्र सरका बिध्यार्थी रहेछन् । रुद्र सरले पसलवालालाई बोलाउनु भयो र रक्सी किनिदिन आग्रह गर्नुभयो । उनिहरू अचम्म मानेर मुखामुख गरिरहेका थिए । पसलवालाले त्यो रक्सी किनिदिने भयो । रुद्र सरका बिध्यार्थीहरुले के सोचेछन् भने उहाँ पनि रक्सी खानुहुने रहेछ । हामी पनि गएर उनीहरकै छेउमा बस्यौं । हामी बस्दाबस्दै उनीहरुले वरपर राखेका रक्सीमा गिलास र बोतलहरु निकाल्न थाले । त्यहाँ मध्येकै एउटाले दुईवटा ग्लास मगायो र हाम्रा अघिल्तिर रक्सी हालेर राखिदियो ।
'ओहो ! भाइ हामी यो जिनिस् खादिनौं त !' रुद्र सरले वरिपरिका गिलासहरु तिर नियाल्दै भन्नुभयो ।
'सरले रक्सी बेच्दै आए पछि हामीले पनि खानुहुँदो रहेछ भनेर सोच्यौं ।' रुद्र सरको अर्को बिध्यार्थीले अफ्ट्यारो मान्दै भन्यो ।
'लौ भाइहरुले अफ्ट्यारो नमानी खाँदा हुन्छ ।' उनीहरुको अफ्ट्यारोलाई उहाँले बुझ्नु भयो र रक्सी बेच्न ल्याउनु परेको यथार्थलाई राखिदिनु भयो ।
हामीले एकएक कप चिया खाएर उनीहरुलाई एकएक वटा 'वेदना' दिएर हिड्यौं । 'वेदना' पत्रिकालाई अघि बढाउन रुद्र सर लाग्नु भएको थियो भन्ने एउटा सन्दर्भित घटना मात्र मैले यहाँ राखेको हुँ ।
२०५१/५२ साल पछि उहाँसँग धेरै संगठनमा सँगसँगै एउटै कमिटिमा बस्ने अवसर मलाई जुèयो । इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाज, प्रगतिशील सांस्कृतिक संगठन, प्रगतिशील लेखक संघ, प्रतिगमन विरोधी स्रष्टाहरुको संयुक्त समिति, लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरुको संयुक्त मञ्च लगायतका संगठनमा म उहाँसँगै रहन अवसर पाएको छु । सबै संगठनमा उहाँ केही पृथक भूमिका निर्वाह गर्न चाहनुहुन्थ्यो । अलिक बढीनै मध्यस्थ भूमिका निर्वाह गर्न चाहने व्यक्तिको रुपमा मैले उहाँलाई बुझेको छु ।
२०५१ सालमा इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाजको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यो सम्मेलनले निनु चापागाईको अध्यक्षतामा एउटा कार्यसमिति निर्माण गर्यो । त्यस सम्मेलनबाट रुद्र सर उपाध्यक्ष र म कोषाध्यक्षमा छानिएँ । इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाज तत्कालिन ने.क.पा. (एकता केन्द्र) को सांस्कृतिक मोर्चा भए पनि छरिएर रहेका र स्वतन्त्र जनसांस्कृतिक कर्मीहरुलाई पनि सकेसम्म सँगै लिएर जाने नीति बन्यो । त्यही नीति अन्र्तगत खगेन्द्र संग्रौला र गोविन्द वर्तमान पनि त्यहाँ रहनुभयो । एकताकेन्द्र छाडेपछि श्याम श्रेष्ठहरुले समाजवादी आन्दोलन नेपाल नामको एउटा सङ्गठन चलाउनु हुन्थ्यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सांस्कृतिक मूल्यका आधारमा हेर्ने प्रयत्न उहाँहरु गर्नुहुन्थ्यो । इसासको त्यो कार्यसमितिमा समाजवादी आन्दोलन नेपालसँग सम्वन्धित साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । कहिलेकाँही एकताकेन्द्रको पार्टी निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न खोज्दा त्यहाँभित्र एउटा अन्तरविरोध देखा पर्थ्यो । मूलतः त्यो अन्र्तरविरोध एकता केन्द्रसँग सम्वन्धित सांस्कृतिक कर्मीहरु र समाजवादी आन्दोलन नेपालका सांस्कृतिककर्मीहरुका बीच चल्ने गर्थ्यो । इसासका वैठकहरुमा गरमागरम बहस र छलफल हुन्थ्यो । त्यसबेला रुद्र सर भरसक मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो । तर कैयौं विषयहरु यस्ता थिए, उहाँले एकातिर उभिनै पर्थ्यो । अन्ततः उहाँ एकातिर उभिनु हुन्थ्यो । त्यसरी एकातिर उभिनुपर्दा उहाँले महशुस गरेको पीडा घर फर्किदा बाटोमा मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो ।
दुई दशकको निरन्तर संगतका कारण उहाँसँगका थुप्रै स्मृतिहरु मेरा अघिल्तिर आइरहेका छन् । उहाँको स्वभाव झल्किने अर्को एउटा संझना यहाँ राख्न उपयुक्त ठानेको छु । मलाई एकिन मिति याद भएन । ०५४/५५ साल तिरको कुरा हुनुपर्छ । साहित्यकार रुद्र खरेल त्यसबेला प्रगतिशील लेखक संघको केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने म राष्ट्रिय परिषदको सदस्य थिएँ । प्रलेसको खोटाङ्ग शाखाले जिल्ला सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेर हामीलाई निम्ता गèयो । त्यहाँका साथीहरुले हामी दुई जनाको नामै तोकेर निम्ता पठाउनुभयो । मेरा लागि दिक्तेल नयाँ ठाँउ थिएन तर रुद्र सरका लागि नयाँ ठाँउ थियो र उहाँसँगको पहाडी यात्रा मेरा लागि पनि नयाँ र रमाइलै थियो । हामी दिक्तेल जानका लागि कटारीको रात्री बस चढ्यौ । हामी विहानको चार बजेतिरै कटारी ओर्लियौं । उज्यालो खस्न पाएकै थिएन जमिनमा ।
'कटारी घुमेर हेर्ने मन थियो तर समयनै मिलेन ।' घुर्मी जाने बस बिहानै लागि रहेकोले हामी चिया पिएर चढ्ने वित्तिकै अँध्यारोमा बसको झ्यालबाट आँखा दौडाउँदै उहाँले भन्नु भयो ।
'फर्किदा हेरौंला '! मैले त्यसबेला भनेको थिएँ ।
'ठिकै छ, फर्कदा तपाईको गाँउ पनि हेर्दै आउने विचार छ ।' उहाँले मन बुझाउनु भएको थियो ।
घुर्मी पुग्दा बिहानको नौ बजिसकेको थियो । तलतिर बगिरहेको निलो सुनकोशी तिर हेरेर उहाँले अर्को प्रस्ताव राख्नु भयो । 'होइन भाइ ! सुनकोशीमा माछा चाख्न पाइदैन !'
एउटा पसलमा झोला थन्क्याएर म माछा खोजदै केही होटल चहारेैं । उहाँको माछाको रुची माथिल्लै डिग्रीको थियो । काठमाण्डौं मै पनि बेलुका भए पछि रुद्र सर मेरो कार्यालय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आउनुहुन्थ्यो र हामी माछा किन्न खिचापोखरी जान्थ्यौं । रुद्र सर विद्युत प्राधिकरणमा जाने वित्तिकै त्यहाँका मेरा सहकर्मीहरु ठट्यौली गर्थे – आज माछा खाने दिन रहेछ ।
घुर्मीमा माछा खोज्दा खोज्दै एउटा पसलमा भरखरै कोशीबाट जाल हालेर ल्याएको आलो माछा भेटियो । उहाँलाई यो खवर सुनाउने वित्तिकै यति खुसी हुनुभयो कि उहाँको त्यसबेलाको अनुहार मेरा अघिल्तिर आदिले पनि नाचिरहेको छ । तर त्यहाँ मलाई एउटा फसाद आइलाग्यो । बिहानको साढे नौ बजेको छ । हामी हिडेर बेलुका बास बस्ने ठाँउ निकै टाढा छ । मेरो मावली घर खोक्सेली पुग्ने लक्ष्य थियो । पहाडी बाटोमा उहाँको हिँडाइ कस्तो छ ? मलाई थाहा थिएन । उहाँ त होटलवालालाई माछाको परिकार बनाउन पो सिकाउन थाल्नुभयो ।
हामी घुर्मीबाट एघार बजेतिर बाटो लाग्यौं । त्यसबेला दिक्तेल जान अहिलेको जस्तो मोटरबाटो थिएन ।
दिउँसो १२ बजेको घाम हिलेपानीको उकालो खल्दल्ती पसिना छुटिरहेको थियो । म अघिअघि थिएँ । रुद्र सर पछिपछि हुनुहुन्थ्यो । अलि माथि पुगेर हेरें रुद्र सर पछि ओरालो बाटोको तलैसम्म हुनुहुन्थ्यो । ढाकर बोक्नेहरुको ताँती अघि बढिरहेको थियो ।
मातृका भाइ ! मलाई चिन्नु भएन ? उहाँ त ढाकर बोकेर मेरा अघिल्तिर उभिँदा पो म छक्क परें ।
रुद्र सर ढाक्र्रे दाईको एउटा सानो छोराको ढाकर आफूले बोकेर सानो ढाक्रेलाई चकलेट खुवाउदै हिडिरहनु भएको मानिसले ढाकर बोकेकोमा उहाँ संवदनशील भइरहनु भएको थियो । सानो ढाकेको बाबुसँग उहाँ उसको पढाईको बारेमा कुरा गरेर हिढिरहनु भएको थियो ।
ढाक्रे साथीहरुको घर त्यहीं हिलेपानीको डाँडामा रहेछ । उनीहरुले हामीलाई आफ्ना घर जान कर गरे । हिलेपानीको भन्ज्याङबाट उत्तरतिरको पाखामा उनीहरुको घर रहेछ । हामी हिड्नुपर्ने बाटो लामो भएकोले मैले उहाँलाई ढाक्रे दाईको घर नजान आग्रह गरे ।
'आ ! भाइ ! बरु पुगिएन भने ओडारमै बास बंसुंला नि !' उहाँले सहज लिनु भयो ।
हामीलाई घरमा लगेर राई दाईले जाँड छानेर एकएक कचौरा बाहिर लयाइदिए । रुद्र सर मलाई हेर्दै जोडजोडले हाँस्नुभयो । उहाँ हाँसेको देखेर राई दाई र राई दाईका परिवार पनि छक्क परे ।
'यो बाजेले जाँड खाँदैन कि के हो ?' राई दाईले अनुमान गरेर मलाई सोधे ।
'हामी खाँदैनौं ।' मैले यसो भन्ने वित्तिकै राई दाईले दुई डबका जाँड घरभित्रै लगे । घरभित्र पसेको पाँच मिनेट नबित्दै थात्रो कपडाको टालोमा आगो बाल्दै बाहिर निस्के र घर पछाडी लागे । उकछिन पछि सिलिबरको थालमा हाम्रा अघिल्तिर राई दाइले मौरीका ठूला ठूला दुई वटा सग्ला चाकाहरु ल्याएर राखिदिए । हामी मौरीको आलो मह खाएर जयराम घाट तिरको बाटो लाग्यौं ।
दूधको सीम ाझरे पछि हामी कदुवातिरको बाटो नगई कोशी किनारै किनार घोपटारबाट उकालो लाग्ने निधो गèयौं । रुद्र सरले फेरी दूधकोशीमा माझी दाईले जाल हान्दै गरेको देख्नुभएछ ।
ल भाई त्यहाँ गएर किनेर ल्याउँ । यसो भन्दै रुद्र सर त माछा मारेको ठाउँ तिर हिडिहाल्नु भयो । माझी दाई भरखरै मात्र जालमा एउटा दुई किलो जतिको माछा मारेका रहेछन् ।
कतिमा बेच्नु हुन्छ माझी भाइ ! रुद्र सर माछा देख्ने वित्तिकै खुसी भइसक्नु भएको थियो ।
दुई सय रुपैंयाँ । माझी दाइले नसोची प्वाक्कै महंगो भाउ राखे ।
धेरै महंगो भन्नु भयो । मैले माछा हेर्दै के भनेको थिएँ रुद्र सरले दुई सय रुपैंयाँ तुरुन्तै दिनु भयो ।
माछा झुण्डाउँदै हामी दूधकोशी किनारै किनार हिड्यौं । जयराम घाटको केही पर पुगेपछि एउटा छाप्रोमा आगो बाल्न लगाएर हामीले त्यो माछा पोलेर खायौं । त्यस बखत प्रगतिशील लेखक संघको दिक्तेल, कार्यक्रममा जाँदा रुद्र सरसँगको यात्रा मलाई निकै रमाइलो महशुस भएको थियो । लामो हिडाइले गर्दा दिक्तेलबाट फर्कदा मेरो घर हेर्ने र मेरो बुवासँग भेट्ने उहाँको इच्छा पुरा हुन पाएन । उहाँका खुट्टाहरुमा हिडाइमा निकै पीडा भएकोले फर्कदा उहाँहरुलाई साथीहरुले लामिडाँडाबाट हवाइजहाजको प्रवन्ध मिलाइदिनु भयो । म कटारी हुँदै काठमाण्डौ फर्कें । मैले यहाँ धेरै सम्झनाहरु भित्रबाट उहाँको स्वभाव झल्कने केही छानेर मात्रै राखेको हुँ । रुद्र खरेलको जीवन पुरै संघर्षको जीवन हो । त्यहाँ संघर्षको अनुभव र पाठले उहाँ आफ्ना समकालीनहरुका बीचमा बेग्लो र पृथक देखिनु भयो ।
रुद्र खरेलको जीवन स्वाभिमानको एउटा पहाड जस्तै अविचल थियो । उहाँसँग आततायी सत्ताहरुको डसाइका थुप्रै अनुभूति थिए । आततापी सत्ताहरुसँग सम्झौता गरेर मूर्दाशान्तिमा सुन्दर जीवन रच्ने घिनलाग्दा सपनाहरु उहाँले कहिलयै पनि पाल्नुभएन । पञ्चायतको जुठोपुरो खाएर राजा महेन्द्र महान् हुन भन्दै निरङ्कुश तन्त्रको पुराण लगाउन उहाँको चेतनाले मान्ने कुरै थिएन । शिक्षित भनिएका उहाँ समवयका केही साथीहरु त्यो कुकर्मतिर लागेको पनि भेटिन्छ । बरु, निम्न वर्गीय आर्थिक, दुरावस्थाले निम्त्याएका सङ्कटसँग लड्न उहाँले श्रमका शिखरहरु चड्नु भयो । कष्टसँग पराजित भएर विवेकलाई विक्री गर्ने कार्य गर्न उहाँले महिल्यै पनि चाहनु भएन । आफैंले लडेर लयाएको प्रजातन्त्र पछि पनि देश तोरी लाहुरे चोकमा रुपान्तरित हुँदै गएको देख्नु भयो र अग्रगामी परिवर्तनका लागि फेरी पनि लड्न प्रेरित गर्नुभयो ।
रुद्र खरेलको साहित्यिक यात्राले व्यक्तिवादलाई कहिल्यै पनि प्रश्रय दिएन । उहाँको लेखनको केन्द्रीय विषय हाम्रो देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषमता प्रतिको विद्रोहात्मक चेतद्वारा निर्मित भएको छ । रोचक र घोचक अभिव्यक्तिमा उहाँले आफ्नो लेखनीबाट समाज र व्यक्तिका अवगुण र दुर्वलता माथि छेडपेच गर्दै एउटा उद्देश्यमूलक बाटो निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको थियो ।
अन्ततः केही गर्न सक्ने उमेर वाँकी हुँदै उहाँको निधन हुन पुग्यो । उहाँलाई दिइने श्रद्धाञ्जली भनेको उहाँले गर्नु भएका असल कार्यलाई अनुसरण गर्नु नै हो । उहाँको जीवन र कर्मबाट नयाँ पुस्ताले सिक्न लायक धेरै कुरा छन् । अवश्य पनि उहाँ तिनै जीवनकर्मका कारण दीर्घ समयसम्म हाम्रो बीचमा बाँच्नुहुने छ । अझ भन्नुपर्दा उहाँ आफ्ना कृतिहरुको गुणात्मकताका कारण दीर्घ समयसम्म बाँच्नु हुनेछ । नेपाली ब्यङ्ग्य निबन्ध फाँटका शिखर व्यक्तित्व रुद्र खरेललाई फेरि पनि श्रद्धाञ्जली !
Posted by शब्द-यात्रा at 5:57 AM